စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ ကြပ်တည်းနေတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၀၀၀)စာကို စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းဖို့အတွက် ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်…. – Cele Snap
စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ ကြပ်တည်းနေတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၀၀၀)စာကို စားသောက်ကုန်တွေလှူဒါန်းဖို့အတွက် ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်နေတဲ့ ဝေဠုကျော်….
ပရိသတ်ကြီးရေ.. လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားဝေဠုကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.။ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ တတ်နိုင်သလာက်အားဖြည့်ပါဝင်ပေးသလို လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရပါတယ်..။
စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၀၀၀)စာကို အစားအသောက်တွေပေးဝေလှူဒါန်းဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြင်ဆင်ထုတ်ပိုးနေပြီး အဆိုပါအလှူမှာ စေတနာရှင်ပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်း ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေလည်း တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်..။23-3-2021 ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှစားသောက်ရေး ခက်ခဲနေသည့် အိမ်ထောင်စု ၁၀၀၀ စာ ကို လှူဒါန်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဒီနေ့ စတင် ပြင်ဆင်ပါတယ်။ဒီနေ့ ဆန်အိတ်တချို့ လာချပါပြီ။အခြားပစ္စည်းတွေ မနက်ဖြန် ထုပ်ပိုးပါမယ်။စေတနာအလှူရှင်များရဲ့ လှူဒါန်း ပေးမှုလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
အခုလို အချိန် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ ကြပ်တည်းနေတဲ့အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အလှူခံပါတယ်။.. “ဆိုပြီး အလှူအကြောင်းကို ဝေမျှပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းဝေဠုကျော် နေအိမ်အမှတ် ၂၃၇ ၊ကံ့ကော်မြိုင် ၂လမ်း ၊ ၂၃ရပ်ကွက် ၊VIP 1 ၊သုဝဏ္ဏ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။( ရေစက် မှတ်တိုင် အနီး )09-4 555 000 10(K Pay)(U Soe Thein)09-4 555 000 1409-77 60 89 484 (Wave Money account)
ဘဏ်မှ ထည့်ဝင်လှုဒါန်းလိုသူများအတွက်Wai Lu Kyaw FoundationKBZ Bank (Thuwunna)07810307800806601ဦးစိုးသိမ်း
12/သကတ (နိုင်) 011 519မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် (သုဝဏ္ဏဘဏ်ခွဲ)045 01 31 04 500 11 83 045ဧရာဝတီဘဏ် (သုဝဏ္ဏဘဏ်ခွဲ)004 522 30 1000 66 00CB Bank (သုဝဏ္ဏဘဏ်ခွဲ)00 78 600 1000 25 739..” ဆိုပြီးတော့လည်း အလှူရှင်တွေ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အသိပေးပြောပြထားတာပါ..။အလှူအကြောင်းကို ဝေမျှထားတဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပြည်သူပရိသတ်တွေကလည်း ဝမ်းသာစွာနဲ့သာဓုခေါ်ကာ အလှူမှာပါဝင်ကြမယ့်အကြောင်းတွေကိုလည်း မှတ်ချက်လေးတွေပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. လူမှုအကြိုးပွုလုပျငနျးတှနေဲ့ ပရဟိတအလုပျတှကေို ဆကျတိုကျလုပျဆောငျနပွေီး ပွညျသူတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အမြားဆုံးရရှိထားသူကတော့ သရုပျဆောငျမငျးသားဝဠေုကြျောပဲ ဖွဈပါတယျ.။ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေမှော ပွညျသူတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့နရောတှမှော တတျနိုငျသလာကျအားဖွညျ့ပါဝငျပေးသလို လှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျနတောကိုလညျး မကွာခဏဆိုသလို တှရေ့ပါတယျ..။
စားဝတျနရေေးခကျခဲနကွေတဲ့ အိမျထောငျစု (၁၀၀၀)စာကို အစားအသောကျတှပေေးဝလှေူဒါနျးဖို့အတှကျ ကိုယျတိုငျကိုယျကပြွငျဆငျထုတျပိုးနပွေီး အဆိုပါအလှူမှာ စတေနာရှငျပွညျသူတှပေါဝငျနိုငျဖို့ကိုလညျး ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနလေညျး တိုကျတှနျးထားပါသေးတယျ..။23-3-2021 ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးမှစားသောကျရေး ခကျခဲနသေညျ့ အိမျထောငျစု ၁၀၀၀ စာ ကို လှူဒါနျး ထောကျပံ့ပေးနိုငျရနျအတှကျ ဒီနေ့ စတငျ ပွငျဆငျပါတယျ။ဒီနေ့ ဆနျအိတျတခြို့ လာခပြါပွီ။အခွားပစ်စညျးတှေ မနကျဖွနျ ထုပျပိုးပါမယျ။စတေနာအလှူရှငျမြားရဲ့ လှူဒါနျး ပေးမှုလညျး လိုအပျပါသေးတယျ။
အခုလို အခြိနျ စားဝတျနရေေး ခကျခဲ ကွပျတညျးနတေဲ့အခွခေံလူတနျးစားမြားအတှကျ အလှူခံပါတယျ။.. “ဆိုပွီး အလှူအကွောငျးကို ဝမြှေပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးဝဠေုကြျော နအေိမျအမှတျ ၂၃၇ ၊ကံ့ကျောမွိုငျ ၂လမျး ၊ ၂၃ရပျကှကျ ၊VIP 1 ၊သုဝဏ်ဏ ၊ သင်ျဃနျးကြှနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။( ရစေကျ မှတျတိုငျ အနီး )09-4 555 000 10(K Pay)(U Soe Thein)09-4 555 000 1409-77 60 89 484 (Wave Money account)
ဘဏျမှ ထညျ့ဝငျလှုဒါနျးလိုသူမြားအတှကျWai Lu Kyaw FoundationKBZ Bank (Thuwunna)07810307800806601ဦးစိုးသိမျး
12/သကတ (နိုငျ) 011 519မွနျမာ့ရှဆေ့ောငျဘဏျ (သုဝဏ်ဏဘဏျခှဲ)045 01 31 04 500 11 83 045ဧရာဝတီဘဏျ (သုဝဏ်ဏဘဏျခှဲ)004 522 30 1000 66 00CB Bank (သုဝဏ်ဏဘဏျခှဲ)00 78 600 1000 25 739..” ဆိုပွီးတော့လညျး အလှူရှငျတှေ ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျဖို့အတှကျလညျး အသိပေးပွောပွထားတာပါ..။အလှူအကွောငျးကို ဝမြှေထားတဲ့ ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးရဲ့ ပို့ဈအောကျမှာတော့ ပွညျသူပရိသတျတှကေလညျး ဝမျးသာစှာနဲ့သာဓုချေါကာ အလှူမှာပါဝငျကွမယျ့အကွောငျးတှကေိုလညျး မှတျခကျြလေးတှပေေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လက်လုပ်လက်စားဖြစ်နေကြတဲ့ အိမ်ခြေတစ်ရာကျော်အတွက် အစားအသောက်များသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စူးရှထက်…..
ပြည်သူတွေအထင်မှားစေမယ့် မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေအပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု…..